Hevitra hanome aingam-panahy anao ary hampivelatra ny fahafahanao mamorona feno | Famoronana an-tserasera
«Art» nataon'i cvc_2k dia nahazo alalana tamin'ny CC BY 2.0
Manana sakana famoronana ve ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana azy? Mafana fo amin'ny fanaovana hosodoko na famolavolana ianao fa banga ny sainao?
Eo amin'ny toerana mety ianao. Ireto misy andiana hevitra handresena ny fanakanana anao. Lasa izao!
1 Mampiasà sketch isan'andro
2 Tsidiho ny fampirantiana hosodoko na foara famolavolana
3 Mahazoa aingam-panahy avy amin'ny natiora
4 Midira amin'ny taranja kanto
5 Mifanerasera amina olona tia kanto
6 Mandania fotoana amin'ny ankizy
Mampiasà sketch isan'andro
Ilay sketchbook na sketchbook dia zavatra ampiasain'ny mpanakanto maro eran'izao tontolo izao hahitana aingam-panahy. Fahita matetika ny mieritreritra fa voasakana isika satria tsy manana aingam-panahy ary mipetraka mipetrapetraka miandry ny mozika hitsidika antsika. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy! Mba hahafahan'izy ireo mitsidika antsika dia tsy maintsy mandrangitra azy ireo isika. Ary ny hevitra tsara dia ny fampiasana ny kahie, izay tokony ho mpiara-misaraka tsy manan-tsahala amin'ny famoronana rehetra. Amin'izany isika dia afaka manao sarisary, manintona hevitra ho an'ny tetik'asa ho avy na ho entina hiala fotsiny. Ho hitanao ny fahitan'ny aingam-panahy anao indray mipy maso, mila mijery fotsiny ny zavakanto amin'ireo zavatra manodidina anao ianao ary misambotra azy.
Betsaka ny mpanao sary nanjary malaza indrindra amin'ny famoahana ireo sary ao amin'ny bokin'izy ireo isan'andro. Izany no nitranga tamin'ny mpanao sary soedoà Mattias Adolfsson, izay entanin'ny aingam-panahy isan'andro, toy ny pensilihazo sy penina, mahita azy ireo amin'ny fomba fijery hafa. Ny fahafaha-mamorona izay azon'ny zavatra tsotra toy ny pensilihazo atolotra antsika dia tsy misy farany.
Sary nataon'i Mattias Adolfsson ho an'i Domestika
Ho fanampin'izay, antony iray hafa hitondrana anao ity kahie ity satria hahazoanao fitenenana misimisy kokoa ianao rehefa manao sary, manao fampiharana isan'andro ary misambotra zavatra voajanahary.
Tsidiho ny fampirantiana hosodoko na foara famolavolana
«Chumy_vacation_Feb07 051» avy amin'i moroccanmary dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Mifindra ao anatin'ny zavatra tianao. Raha mandoko ianao dia mankanesa any amin'ny tranombakoka ao an-tanànanao, mitsidika fampirantiana vaovao (matetika dia misy fampirantiana maro isam-bolana, eny fa na dia amin'ny tanàna kely aza) na mankanesa any amin'ny tsenan'ny asa-tanana. Ny tsenan'ny asa tanana dia toerana tena tsara hahitana zavaboary tena izy. Raha tianao ny famolavolana dia fantaro ny momba ny foara tsy lavitra eo akaiky eo. Azonao atao koa ny mandeha amin'ny fialantsiny amin'ny fitsidihana ireo tranokala ireo. Ho hitanao ao ny olona toa anao, liana amin'ny lohahevitra iray ihany. Midira amin'ny resadresaka ary milentika amin'izao tontolo izao, azo antoka ny aingam-panahy.
Mahazoa aingam-panahy avy amin'ny natiora
"IMG_2438" avy amin'i Víctor Luna dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Ny fitsangatsangana dia fomba tsara hiantsoana ny mozika. Diniho izay rehetra manodidina anao, manomboka amin'ny voninkazo kely indrindra ka hatramin'ny bibikely izay manidina amin'ny tavanao. Raha mpaka sary ianao dia aza hadino ny fakantsarinao. Tsy azo atao ny tsy mahazo aingam-panahy amin'ny fitoniana omen'ny natiora antsika. Asehoy an'izao tontolo izao izay olona vitsy matetika no mahita rehefa mandeha an-tendrombohitra. Raha tianao ny mandoko na mamolavola dia azonao atao ny mampiasa ny sary ho fototry ny asanao amin'ny ho avy. Ho fanampin'izay, ny fialan-tsasatra vokarin'ireny fandehandehanana ireny dia hahatonga ny sainao hiala sasatra sy ho mazoto, mieritreritra ireo zavaboary amin'ny ho avy indray mipy maso.
Midira amin'ny taranja kanto
Azo antoka fa efa nieritreritra ny hianatra teknika vaovao ianao na handavorary ireo efa fantatrao. Raiso ny dingana ary tadiavo ny Mazava ho azy. Amin'ny Internet isika dia afaka mahita avy amin'ny taranja mifanatrika ka hatramin'ny taranja kanto amin'ny Internet amin'ny vidiny rehetra, na maimaim-poana aza.
Mifanerasera amina olona tia kanto
Ilaina ny miresaka amin'ireo namana mitovy zava-kanto aminao raha manaitaitra anao izany. Azonao atao ny mizara hevitra sy fisalasalana momba ny tetikasa ho avy. Mamorona tetikasa iraisana aza. Sa mijanona mandoko fotsiny. Raha tsy mahalala olona ianao, amin'ny tambajotra dia misy vondrona marobe misy sampana kanto maro izay manao fivoriana sy mizara fahalalana. Azo atao ihany koa fa ao amin'ny tanànanao dia misy fikambanana zavakanto mifandraika amin'ilay lohahevitra mahaliana anao ary misy hetsika mahaliana.
Mandania fotoana amin'ny ankizy
Raha misy mpanakanto manana famoronana be loatra dia ireo no ankizy. Diniho tsara ny famoronana noforonin'izy ireo sy ny fandikana ny sary azo antoka. Loharanon-kevitra lehibe tany am-boalohany izy ireo. Ho fanampin'ny fitsiky anao, azo antoka ny aingam-panahy.
Inona no andrasanao hametraka ny sasany amin'ireto hevitra ireto ho fampiharana sy hamoronana indray?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Hevitra hanome aingam-panahy anao sy handresena ny sakana famoronana